TuneUp Utilities 2012 12.0.3600.104 (36.36MB) | IT Sharing Network
TuneUp Utilities 2012 12.0.3600.104 (36.36MB)
TuneUp ကတော့သူငယ်ချင်းအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားပါ .... ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်သွက်လက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် .... Registry ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ခြင်း၊ registry ကို စနစ်တကျ ဖြစ်အောင် Defragment လုပ်ပေးခြင်း၊ အသုံးမလိုတော့တဲ့ shortcuts များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ မလိုအပ်တော့တဲ့ temporary files များကို ဖျက်ပေးခြင်း၊ hard disk ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်များကို စနစ်ကျ ပြန်စီပေးခြင်း စသည့် Tools များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ... Home page ကိုနှိပ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ အသေးစိပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲသုံးနိုင်ဖို့ Keymaker + Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ် ... install လုပ်တဲ့အခါမှာ အင်တာနက်ကို ဖြုတ်ထားပေးရပါမယ် ... Patch and Crack Files အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...
TuneUp Utilities® 2012 optimizes the performance of your computer, corrects problems and helps you to customize your system to suit your needs. It combines important aspects of system configuration, security, cleaning and maintenance underamodern interface. You can remove unnecessary files from your hard disk(s), clean and optimize the registry, tweak your internet connection settings, recover deleted files, optimize memory and view hardware information and tips. TuneUp Utilities also includesaProgram Deactivator, Uninstaller, registry Editor, Task Manager and even an Undelete tool to recover files that have been deleted from the recycle bin. A very nice tool, with many features that will appeal to novice as well as advanced users, TuneUp Utilities 2012 makes Windows faster, more secure, and comfortable.
Keymaker + Patch
jumbofiles မှ download ယူနည်း ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
System Repair TuneUp Utilities Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook